अस्पताल छोडेर क्लिनिकमा भेटिए चिकित्सक | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
अस्पताल छोडेर क्लिनिकमा भेटिए चिकित्सक
२०७१ मंसिर १७, बुधबार ०२:३५ गते
भरतपुर । अस्पताल समयमा एक निजी क्लिनिकबाटै बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका रेडियोलोजिष्ट डा. सन्जयकुमार शाहलाई स्थानीय बासिन्दाहरुले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले अहिले सो अस्पतालका चिकित्सकहरुमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अस्पताल समयमै निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा चिकित्सक भेटिनु गम्भीर प्रश्न उब्जेको क्यान्सर सेवा समाजका अध्यक्ष श्याम लामिछानेले बताए ।
‘एउटामात्रै हैन, यस अस्पतालका धेरै चिकित्सक अस्पताल समयभित्रै निजी क्लिनिकमा भेटिन्छन्’, उनले थपे, ‘अस्पताल प्रशासनको अनुगमन फिलतो हँुदा चिकित्सकहरुले अहिले अनुशासनको समेत ख्याल गरेका छैनन् ।’
डा. शाहलाई स्थानीय बासिन्दाले क्यान्सर अस्पतालअगाडि रहेको सगरमाथा डाइनोसिस सेन्टरबाट दिउँसो साढे १ बजे नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका हुन् । बिहान नौ बजेबाट साढे तीन बजेसम्मको समयलाई अस्पताल समयका रुपमा लिइन्छ ।
लामिछाने क्यान्सरअगाडि मात्रै हैन, भरतपुरका धेरै निजी अस्पतालहरुमै क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक भेटिने दावी गर्छन् । भरतपुरका धेरै अस्पतालमा क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सकहरुको नाम साइनबोर्डमा देखिन्छ ।
‘अस्पतालको समयबाहेकको समयमा निजी क्षेत्रमा उपचार गराउने चिकित्सकले अनुमति लिएका हुन्’, एक स्थानीयले भने, ‘अस्पताल समयमै निजी क्षेत्रमा भेटिनु चिकित्सकको लापरवाही हो ।’
अहिले क्यान्सर अस्पतालका केही चिकित्सकबाहेक अधिकाशले निजी क्षेत्रमा बिरामीको उपचार गर्छन् । अस्पतालका ४० जना चिकित्सकहरुमध्ये कार्यकारी निर्देशक डा. सीबी पुन, उपकार्यकारी निर्देशकद्वय डा.विजय न्यौपाने र डा. देजकुमार गौतम, अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. भक्तमान श्रेष्ठलगायतका ३१ जना चिकित्सकहरु अहिले निजी क्षेत्रमा बिरामी परीक्षण गर्छन् । उनीहरुमध्ये केही अझै पनि अस्पताल समयमै निजी क्षेत्रका अस्पतालमा भेटिने गरिएको बताइन्छ ।
स्थानीय बासिन्दा वीरेन्द्र लामिछाने पनि अस्पताल प्रशासनको निगरानी नहँुदा धेरै चिकित्सक अस्पताल समयमै निजी क्षेत्रमा भेटिने गरेको जानकारी दिन्छन् । ‘अफिस समयमै बाहिर निस्किएका चिकित्सकहरुलाई रोक्ने क्षमता अस्पताल प्रशासनले राख्नुप¥यो’, उनले भने ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सीबी पुन पनि अस्पताल समयमै निजी क्षेत्रमा चिकित्सक भेटिनु दुःखद् भएकको टिप्पणी गर्छन् । ‘निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरुमा क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सकहरु नै जान हुन्न भन्ने हैन, तर अस्पताल समयमा उनीहरुको सेवा अस्पतालमै हुनुपर्छ’, उनले भने ।
केही स्थानीयले त निजी अस्पतालमा चिकित्सकको उपचार सेवा रोक्नुपर्ने तर्क गर्छन् । तर अस्पतालका उपकार्यकारी निर्देशक डा. गौतमले भने विशिष्ट ज्ञान भएका चिकित्सकहरुलाई अस्पतालको समयभन्दा बाहिर उपचार रोक्न नहुने धारणा राख्छन् ।
‘क्यान्सरका बिरामीको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ । यो अस्पताल (क्यान्सर अस्पताल)ले मात्रै उपचार सेवा दिन नसक्ने यो अवस्थामा आफ्नो ज्ञानलाई निजी क्षेत्रमा पोखेर बिरामीले उपचार पाउनुपर्छ’, उनले थपे, ‘यो अस्पताल समयभन्दा बाहिरको समयमा हुनुपर्छ ।’
जो निजीमै जादैनन् …
यसैबच बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका ४० जना चिकित्सकमध्ये अहिले नौजनाले मात्रै निजी क्लिनिकमा बिरामी हेर्दैनन् । सो अस्पतालको अन्य ३१ जनाले निजी क्लिनिकमा बिरामी हेरेको पाइएको छ । क्यान्सरका बिरामी र क्यान्सरजस्तो रोगलाई अस्पतालमा मात्रै हेर्नुपर्ने मान्यताले उनीहरु निजी क्षेत्रमा नगएको दावी गर्छन् ।
यसरी निजी क्षेत्रमा बिरामी जाँच नगर्ने चिकित्सकहरुमा मेडिसिनतर्फका डा.जया श्रेष्ठ, रेडियोथेरापीतर्फका डा. अन्जनीकुमार झा, डा.सुरेश श्रेष्ठ, डा. शिवजी पौडेल, डा. सुवास पण्डित, डा.प्रदीप न्यौपाने, डा.रन्जनभक्त भण्डारी, डा. निभा तिवारी र पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. लक्ष्मीनारायण सिंह रहेका छन् ।
निजी क्षेत्रमा उपचार नगराउने चिकित्सकमध्येका एक डा. जया श्रेष्ठ क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोग लागेका बिरामीलाई निजी क्षेत्रमा लगेर उपचार गर्नु पाप भएको टिप्प्णी गर्छन् । ‘क्यान्सर अस्पताल छिरेका बिरामीले अस्पतालभित्रै उपचार पाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘क्यान्सरको जस्तो विशेषज्ञ सेवा निजी अस्पतालमा हँुदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।